भारत र चीनबीच युद्ध भए कस्ले जित्छ ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
भारत र चीनबीच युद्ध भए कस्ले जित्छ ?
भारत र चीनबीचको सम्वन्ध यतिखेर तनावपुर्ण छ। भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा चीनसंग भुटानका तर्फबाट भिड्न भारत पुगेको छ। यही कारणले सन १९६२को युद्ध यता पहिलो पटक भारत र चीनबीच सम्वन्ध निकै तल्लो स्तरमा ओर्लिएको छ।
यो क्षेत्रमा दुइ शक्तिशाली मुलुकका बीच युद्द हुने संशयले छिमेकमा रहेका मुलुकहरु चिन्तित बनेका छन्। नेपाल यसको अपवाद हुने कुरै भएन ।
अहिले विवादमा चीन, भारतसंगै भुटान पनि मिसिएको छ । चीन भुटानसंग मात्र एउटा निचोडमा पुग्न चाहन्छ तर भारत चीनलाई भुटानबाट प्रहार गर्ने पाएको मौका चुकाउने पक्षमा देखिदैन्।
नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयता विश्वका अन्य मुलुकसंग निकै ‘इन्गेज’ रहँदै भएको भारत चीनका विषयमा यति आक्रमक देखिएको यो नै पहिलो पटक हो। अन्यथा सन १९६२ युद्धमा पराजय यता भारत सधै रक्षात्मक अवस्थामा देखिँदै आएको थियो।
यो पनि पढ्नुस: चिनियाँ युद्धपोत युरोपतिर अघि बढ्दै..
तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रशंग हो, युद्ध भइहाले कस्ले जित्छ। धेरैको चासोको विषय रहँदै आएको छ, संसारका सबै भन्दा बढि जनसंख्या भएका दुइ देश युद्धमा जाँदा कस्ले जित्छ ? चासो स्वभाविक नै भए पनि नतिजा विध्वंशकारी हुनेमा भने कसैलाई शंका छैन।
युद्ध कसैले पनि जित्दैन्। युद्धमा दुबै पक्षलाई हार मात्र हात लाग्नेछ। युद्धले ल्याउने नरसंहार यति भयानक हुनेछ कि दुबै देशहरु उठ्नै नसक्ने गरि थच्चिनेछन्। यसको असर ती देशका छिमेका रहेका अन्यहरुमा पनि नराम्ररी पर्नेछ। युद्धले कसैलाई फाइदा गर्नेछैन् ।
यी तमाम विषयमा बाबजुत संसारका युद्ध हुने गरेका छन् । हजारौ निर्दोषहरु ज्यान गुमाउने गरेका छन् । संसारले दुई त्रासदीपुर्ण युद्ध बेहोरिसकेको छ । युद्धको त्रासदीबाट संसार जानकार छ तर पनि युद्धको तयारी पनि चलिरहेकै छ।
कस्तो कति शक्ति ?
चीनसंग २३ लाख भन्दा सेना छन भने भारतसंग १३ लाख भन्दा बढिको फौज छ।
यसै गरि चीनसंग ९१५० वटा ट्याङक छ भने भारतसंग ६४६४ ट्याङक रहेका छन्।
भारत यतिखेर संसारको सबै भन्दा बढि हतियार किन्ने देश बनेको छ। भारतले अमेरिका, रसिया र युरोपलेी देशबाट सबै भन्दा हतियार किन्ने गरेको छ। चीनलाई भने यस्तो सुविधा छैन, चीनले रसियासंग पनि हतियार किन्ने गरकेो छ। यस हिसावले भारतले संसारका सवै देशबाट हतियार किनेर जम्मा गरेको छ। यस विषयमा अर्को तर्क के पनि छ भने चीनले धेरै हतियार विकास आफै गरेको छ। जब सम्म कुनै देश हतियारमा स्वनिर्भर हुँदैन सुपरपावर बन्न सक्दैन। जस्तो अमेरिकाले कसैसंग हतियार किन्दैन्। यसल हिसावले भने चीनको पल्ला भारी देखिन्छ।
त्यसैले भारत र चीनमा कस्ले युद्ध जित्छ भन्ने प्रश्नको सजिलो उत्तर उपलब्ध छैन। दुबै देश आणविक हतियार सम्पन्न देश हुन्। एक्काइसौ शताब्दीमा युद्धहरु सैन्य क्षमताका आधारमा मात्र लडिन्न । रणनैतिक, आर्थिक र भुराजनैतिक रुपमा माथि पर्नेलाई जीत आफ्नो पोल्टामा पार्न सजिलो हुन्छ
Previousसबै डिआइजीलाई बोलाएर गृहमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन
Nextयो वर्ष दुई पर्व एकैदिन